UXiaomi ufuna ukwazisa iiTV zeTV eSpain ngaphambi kokuphela konyaka | I-Androidsis
UXiaomi uzokwazisa iiTV ezikumgangatho ophezulu eSpain kulo nyaka
UXiaomi unekhathalogu ebanzi yeefowuni kwintengiso. Nangona uphawu lwaseTshayina lungenafowuni kuphela, kuba zineentlobo ezahlukeneyo zeemveliso, phakathi kwazo sikwafumana neethelevishini. Ngapha koko, kutshanje babonisa umabonakude omtsha ngokusesikweni kumsitho owawuse China.
Nangona uninzi lweethelevishini zeXiaomi zingazange zisungulwe kwiimarike ezinjengeSpain. Nangona bekukho amarhe amaninzi malunga noku malunga neenyanga, esazisa ukuba banokufika kungekudala. Ngokwenkampani iimodeli zokuqala zinokufika kulo nyaka.
Uphawu lwaseTshayina belunabo Injongo yokuqalisa iithelevishini zabo eSpain. Bayazi ukuba banokukhuphisana neempawu ezinje nge-LG okanye i-Samsung kule ndima, ngakumbi ngenxa yamaxabiso abo asezantsi. Kodwa ukusuka kuXiaomi bayagxininisa ukuba yinto engaxhomekekanga kubo kuphela, kodwa kufuneka basebenzisane nabantu besithathu.
Ke yinto ethatha ixesha ke ayixhomekekanga kwinkampani uqobo. Umbuzo ngowokuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuba yonke into ilungele ukuba ezi televishini zohlobo lweTshayina zizokwaziswa eSpain. Ngokomgaqo, kwiinyanga nje ezimbalwa kunokubakho ukumiselwa.
UXiaomi ucacile ukuba bafuna ukwazisa oomabonakude eSpain. Yinto elindelwe ngabathengi abaninzi kwaye imithombo yeendaba eyahlukeneyo ibibuza izizathu zokuba kutheni le nto ingenzeki iinyanga. Ke yinto enokuthi ithengise kakuhle kwilizwe lethu xa ithe yasungulwa.
Siya kuzimamela ngakumbi iindaba ezivela kwinkampani ngokwayo malunga noku. Kunokubakho iindaba ezingakumbi malunga naye kwiiveki ezimbalwa ukumiliselwa kweethelevishini zokuqala zeXiaomi eSpain. Okwangoku akukabikho ntetho yeemodeli ezithile, nangona kufanelekile ukuba ezinye zeethelevishini zayo zamva nje ziya kuba zezona zingene kwimarike.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » UXiaomi uzokwazisa iiTV ezikumgangatho ophezulu eSpain kulo nyaka
IPixel 4 iya kuba nendlela entsha yokwenza ukuba uMncedisi kaGoogle asebenze
Isamsung ivala umzi-mveliso wokugqibela owawuseChina